न पिपिई, न ज्वरो नाप्ने यन्त्र, क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्नुको मात्रै के अर्थ? – Health Post Nepal
न पिपिई, न ज्वरो नाप्ने यन्त्र, क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्नुको मात्रै के अर्थ?
२०७६ चैत २८ गते १८:४१
डडेल्धुरामा पाँच कोरोना संक्रमितलाई निको नहुँदै पठाइयो घर
४० दिनपछि सुदूरपश्चिममा नयाँ संक्रमित
कोरोना वार्डमा एक साता डिउटी गरेकी नर्स भन्छिन्- डरलाई जितेर उपचारमा खटिनुपर्छ
‘एउटै पिपिई स्यानिटाइजर दलेर पटकपटक लगाउँछौं’
पहिला आफैं बाेलायाे, अहिले सरकार ‘हरायाे’
दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर अमरसिंह धामीले स्वास्थ्य उपकरणबिनाको क्वारेन्टाइन राख्नुको अर्थ नरहेको तीतो पोखेका छन्। यस्तो गम्भीर समस्या हुँदाहुँदै पनि कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम बढ्दै गएपछि उनको नगरपालिकाले महामारी नियन्त्रणका लागि दुई ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ।
क्वारेन्टाइन भए पनि स्वास्थ्य सामग्री अभावले उनीहरूको दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समस्या भएका कारण मेयर धामीले उपकरणबिना क्वारेन्टाइनको कुनै अर्थ नहुने बताएका हुन्।
‘स्वास्थ्य सामग्रीबिना कसरी भाइरस परीक्षण गर्नु? नगरपालिकामा न त पिपिई छ, न थर्मल गन,’ मेयर धामीले हेल्थपोस्टनेपालसँग भने ‘स्वास्थ्य उपकरणबिना क्वारेन्टाइन राख्नुको कुनै औचित्य छैन।’
उनले स्वास्थ्य सामग्री अभावले स्वास्थयकर्मी उच्च जोखिममा रहेको र उनीहरू उपकरणबिना नै काममा खटिइरहेको बताए।
सुदूरपश्चिमका चारजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि पूरै सुदूर त्रसित बनेको छ। भाइरस संक्रमणको परीक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने अन्य विकल्प नभएपछि दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका आफैंले मास्क सिलाएर वितरण गरिरहेको छ।
‘परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएपछि प्रत्येक वडालाई मास्क सिलाएर वितरण गर्न भनेका छौ,’ उनले भने, ‘थर्मोमिटरले मात्रै काम गर्नु परिरहेको छ, काम गर्न गाह्रो भएको छ।’
नगरपालिकाले मास्क किन्न खोजे पनि कतै नपाइएको उनले बताए।
किन्न खोज्दा पनि नपाएपछि नगरपालिकाले सुतीको कपडाबाट मास्क सिलाएर बाँडेको हो।
‘क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई जाँच गर्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई गाह्रो भएको छ। जोखिम मोलेर स्वास्थ्यकर्मी खटिइरहनुभएको छ,’ उनले भने।
खुला सिमाना भएकाले भारत तथा अन्य क्षेत्रबाट आउनेबाट पनि जोखिम थपिएको उनले बताए। नगरपालिकाले दुई ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ जसमा गोकुलेश्ववरमा चार र बलाचमा १४ जना छन्।
हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका र अन्य कुतै पनि कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको छैन।
नगरपालिकाले गोकुलेश्वरमा ३० र बलाचमा १६ शैय्याको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ।
‘भाइरसको महामारी रोकथाम र उपचारका लागि कोष स्थापना गर्न जनप्रतिनिधिको तीन बैठकको भत्ता कटौती र अन्य कर्मचारीको तीन दिनको तलब काट्ने निर्णय गरेका छौ,’ धामीले भने, ‘कोष २५ लाखको हुनेछ जसमा ४ लाख प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ भने बाँकी २१ लाख नगरपालिकाकै छ।’
नगरपालिकाले उपचारका लागि गोकुलेश्वरमा ४६ क्वारेन्टाइन बेड र चार आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरेको छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नगरपालिकाले नगरभित्रका पनेबाज, बगौरा, गोकुलेश्वर, देथला, बलाचलगायतमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ।
त्यस्तै, बैतडीको नाका भएकाले नगरभित्रको कर्कलेमा पनि हेल्थ डेस्क राखिएको छ। भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै नगरपालिकाले सबै वडामा स्वयंसेविका खटाएको धामीले बताए।
लकडाउनले समस्यामा परेका विपन्न, गरीब, असहाय तथा दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा गर्नेको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको र उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाभित्र करिब १ सय स्वास्थ्यकर्मी र दुईथान एम्बुलेन्स छन्। भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन पालना गर्न मेयर धामीले सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका छ्न।
‘यो सार्वजनिक स्वास्थ्यको सवाल हो। यसमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ, सबैले मिलेर महामारीको सामना गर्नुपर्छु,’ धामीले भने।
Tags: सुदूरपश्चिम प्रदेश